Xildhibaanadii ku geeriyooday qaraxii Ambassador oo aas qaran loo sameeyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho aas qaran loogu sameeyey Xildhibaan C/laahi Jaamac Xuseen (Kabaweyne) iyo Xildhibaan Prof. Maxamuud Maxamed Guure, oo labaduba kamid ahaa mas’uuliyiintii ku dhintay weerarkii xalay cadowgu uu kusoo qaaday Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho.
Aaska Xildhibaanada waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin katirsan dowlada Soomaaliya, iyadoo madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheakh Maxamuud iyo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ay ka qeyb galeen salaadii janaasada ee lagu tukaday Allaha u naxariistee marxuumiinta.
Xildhibaan, Cabdi Xaashi C/laahi, oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka qeybgalay aaska ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka isku meel ugu soo jeestaan sidii looga hortagi lahaa kooxaha caadeystay in ay maalin kasta dilaan dadka wax galka u ah dadka iyo dalka Soomaaliya.
Waxaa lagu aasay qabuuraha booliska ee magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale aaska ay ka qeyb galeen ehelada, xildhibaanada baarlamaanka qaarkood iyo mas’uuliyiin kale.